ဆန့်ကျင်ဖက်တို့ ညီညွတ်မှု | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
မမိုးချိုသင်းရဲ. အတွေးလေးတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ။ ဆရာ့ ကဗျာလေးကလည်း ပီပြင်လေတော့ ပန်းချီကားလေးတောင် ကြည့်ချင်လာပြီ။ ဘယ်အရာမဆို harmony ဖြစ်နေရင်တော့ အေးချမ်းရမှာ သေချာပါတယ်လေ..။
သိပ်ကောင်းတဲ့ အတွေးလေးပါ အမ။ ဆန့် ကျင်ဖက်တို့ ညီညွတ်တဲ့အခါ အရာအားလုံး အဆင်ပြေလှပသွားမှာပါ။
အမစာလေးရယ်၊ ဆရာ့ ကဗျာလေးရယ်ကို ဖတ်ပြီး.. ကိုအန်ဒီ ပို့စ် ကို သွားသတိရတယ်.. ဟုတ်ပါ့နော် အမရယ် ဆန့်ကျင်ဖက်တွေလည်း လှပညီညွတ်နေတတ်တာပဲကိုးနော်...
ကိုအန်ဒီ ပို့စ်ကို ကြားကြော်ငြာညွှန်းလိုက်ဦးမယ်
ရွှေမြန်မာပြည်ကြီး အရမ်းလှဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်
အမပြောတဲ့ ပန်းချီကားကိုမြင်ဖူးချင်လိုက်တာ။ စကားလုံးလေး နဲ့ အတွေကလှတယ်နော်... "ဆန့်ကျင်ဖက်တို့ ညီညွတ်မှု"
စာပြန်ရေးဖို့ကြိုးစားတာ ကျေးဇူးပါ။ အစ်မရေ နေကောကောင်းရဲ့လားဟင်...
အမရဲ့ တင်ပြမှု ဆရာကြီး ရဲ့ ကဗျာ ထပ်တူပြုသွားတော့ ဖတ်ကနဲ တွေးမိတာ ရှင်းမင်းညို လိုပဲ ထပ်တူကျလို့ နေပါလား.....?
“ဆန့်ကျင်ဖက်တွေ ပြောင်းသွားရင် လောကကြီးက ကောင်းသွားမှာပဲ” တဲ့။
ဆန့်ကျင်ဖက်တွေပြောင်းပြီး အားလုံးတူသွားလို့ကောင်းတာမျိုးထက် မတူညီတဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်တွေကို အချိုးညီညီ ဟန်ချက်ကျကျ ပေါင်းစပ်နိုင်တာကမှ ပိုအဓိပ္ပါယ်ရှိတာ။
အမချိုသင်းရေ နိနိတခါမှ တွေးမကြည့်ဖူးတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ ထူးဆန်းလို့ ဖတ်ပြီးတော့ စဉ်းစားကြည့်နေရသေးတယ် အကြာကြီးပဲ။
လမ်းဘေးပန်းချီကားလေးတွေကို တန်ဘိုးထား ငေးတတ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ...။
ထက် လမ်းဘေးက ပန်းချီကားလေးတွေက
ပိုပြီး အနုပညာဆန်တာလဲ တွေ့ ရတတ်ပါတယ်...။
မညီမျှပေမယ့် သူ့ လိုင်းနဲ့ သူတော့ရပ်တည်နေကြ၊
ဆရာကြီးရဲ့ ပညာအတွေ့ အကြုံအရ...
ဘ၀ အကန့် တွေကို အနုပညာကဗျာနဲ့ တင်စားသွား
သဘာဝရဲ့ဘက်ပြိုင်မှု အားတွေကို
ယှဉ်ပြထားတယ်လို့ပညာယူစဉ်းစားမိပါတယ်...
ဆရာ့ရဲ့ ကဗျာလေးကိုတော့ သိမ်းထားပါရစေ...။
ကဗျာလေးကို သိမ်းမထားဘဲ ဝေဌပေးတဲ့ အတွက်
ဆရာကြီးနဲ့ ဆရာကြီးသမီး (မမ)ရယ်။
မြန်မာပြည် အတွက်က ဒါလေးပဲ လိုနေတာပါ။
ဖြူစင် မှန်ကန်တဲ့ စိတ်ထားသာရှိရင် ဘယ်အရာမဆို တွဲဖက်လို့ရပါတယ်။
ဆရာကြီးကလည်း ကမ္ဘာမြေမှာရှိတဲ့ အရာတွေကနေ လူတွေအတွက် အကျိုးရှိမဲ့ ကဗျာကို ရေးသွားခဲ့တယ်။
မမကလည်း ဆရာကြီး ပြောချင်တဲ့ အရာကို လူတိုင်းသိနိုင်အောင် ရေးပေးတတ်တယ်။
နောက်...အင်းးး မသိဘူး..ကြာမှပဲ ပြန်လာတော့မယ်။
အမ စာရေးတာတွေတော့ လာဖတ်နေမှာပါ။
အစ်မရေ အစ်မက ပန်းချီကားလေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေးကို ရေးချိန်မှာ ဆရာဝသုန်ဆုံးတယ် သိလား ... စိတ်မကောင်းဘူး။ ကုန်ပြီအစ်မရေ
လူတွေမှာတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ ညီညွတ်ဘို့ ပြောကြတဲ့အခါ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေက နှစ်ဖက်စလုံးက ရင့်ကျက်သူတွေဖြစ်ပါမှ မမိုးချိုသင်း မျှော်လင့်တဲ့ လှပတဲ့ ပေါင်းစည်းမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်မယ်။
တဖက်ကရင့်ကျက်ပြီး တဖက်က နုနေရင် လည်း ဘယ်လိုမှ ရင်ကြားစေ့လို့မရဘူး။
နှစ်ဖက်လုံးက မရင့်ကျက်ရင် စစ်ပွဲတွေ ရန်ပွဲတွေ အတောမသတ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ကောလင်းပေါင်ဝဲ (ဗမာလို အသံထွက်နဲ့ ရေးရတာမနိပ်ဘူး) တို့လို တဖက်ပါတီက သမ္မတလောင်းကို ထောက်ခံရလောက်အောင် သတ္တိရှိပုံ၊ သဘောထားကြီးပုံကို လေးစားမိပါတယ်။
ခင်လို့လာပါတယ်။ ဆံပင်တွေထောင်နေတာ မြင်ယောင်ပြီး ရယ်သွားတယ်။ mr bean ကိုသတိရလို့. ကြည့်ဘူးတယ်ဟုတ်။ သူ့ဆံပင်တွေ ထောင်သွားတာလေ။ ဗိုက် ကြီး ကော့ကော့နဲ့လား ကုန်းကုန်းနံ့လားလည်းမြင်ယောင်ပြီး စိတ် မကောင်းဘူး. သိတယ် အရမ်းခံစားရမှာဘဲ။ နာကလည်းနာ လှူပ် ကလည်းမလူပ်နိုင်။
မမိုးချို..Blog အသစ်လေးဆီလာလည်ဖို့ဖိတ်ပါရစေ..အမရဲ့ Blog ကိုလင့်ထားတာလည်းခွင့်ပြုပါ။ www.yawnathanzinyaw.blogspot.com
CBox မရှိလို့ Comment ကနေခွင့်တောင်းတာပါ။
စီဗုံးလဲ မရှိလို့အားနားနားနဲ့ ဘဲ လာအော်သွားပါတယ်။
စာပြန်ရေးနေပြီဆိုတာ လာသတင်းပို့ တာပါ။ လွမ်းနေတယ်ဆိုလို့ပြန်လာပြီး)
ကျနော် နေ့တိုင်းလိုလို လာလည်ပါတယ်။ ကွန့်မန့်မရေးခဲ့လို့ လာမလည်ဘူးလို့ မထင်ပါနဲ့။ ကျနော်လည်း ခင်ဗျားအခုရေးတဲ့ သဘောထားမျိုး အရမ်းရေးချင်တယ်။ မရေးတတ်ရင် ကျနော့်ကို တလွဲထင်ကြဦးမယ်။ (သိတယ်နော်) ဒါပေမယ့် ဒါဟာ တကယ့်အမှန်တရားပါ။ ဆရာတာရာက ရန်သူကို မိတ်ဆွေဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရတယ်လို့ ပြောဖူးတာပဲ။ ကျနော်ကြိုးစားပြီး ရေးကြည့်ပါဦးမယ်။
ဆန့် ကျင်ဖက်တွေ ညီညွတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ။
ဇစ်တွေကို လက်နဲ့ ထိန်းပြီး ဆွဲစိရသလို အသိတရားလေးနည်းနည်း စာနာမှုလေးနည်းနည်း နဲ့ ဆွဲညှိလိုက်ရင်တော့ ဆန့် ကျင်ဖက်တွေ ညီညွတ်လာမလားပဲ။